UDrake Ukhipha "Ngicela Ungixolele", An Exclusive Short On Apple Music | Ngivela kwa-mac
UDrake Ukhipha "Ngicela Ungixolele," i-Exclusive Short On Apple Music
Kufakiwe | | I-Apple Umculo, eziningana
Umculi womculo UDrake ukhiphe ngokukhethekile ifilimu emfushane yemizuzu engama-23 ezohambisana ne-albhamu yakhe yakamuva, i- «Views«, Kuphela ku-Apple Music.
Esihloko sithi "Ngicela Ungixolele," le filimu emfushane ilandela uDrake nentombi yakhe, imodeli yaseBelgium uFanny Neguesha, emzamweni wabo wokuwina ingcebo yomuntu ocebile. Umsindo walesi sifushane uhlanganiswe nezingoma zomculi ezifana ne- "One Dance", "Controlla", "9", "Views" nokunye.
1 UDrake uzuza okunye okukhethekile kwe-Apple Music
2 I-Apple iqinisa okuqukethwe kwevidiyo kwe-Apple Music
3 Ama-Apple exclusives awina abahlambalazi
UDrake uzuza okunye okukhethekile kwe-Apple Music
Noma nje eminye imikhakha emikhulu yomkhakha womculo ifuna ukunqanda inqubomgomo yokukhishwa okukhethekile ye-Apple Music, kubonakala sengathi inkampani yaseCupertino, futhi okungenani abanye abaculi abanjengoDrake, abakakulungeli ukudela izinzuzo abazinikezayo. izinhlobo zama-debuts.
I-Apple Music esanda kuthola igoli ukukhishwa kwe- "Please Forgive Me", ifilimu emfushane edlala indawo kaDrake nentombi yakhe (ingikhumbuza amafilimu kaPaco León, yonke into ihlala emndenini,), ingoma yayo, njengoba ibingakwazi ' kungenjalo, yakhiwa izingoma ezikule albhamu yakamuva yomculi ethi, "Views". Ngakho-ke, Noma yimuphi umlandeli kaDrake ofuna ngobuqotho ukubona le movie yemizuzu engama-23 futhi ongakabhalisi insiza ye-Apple Music, kufanele abheke yebo noma yebo, futhi mhlawumbe, bagcina sebebhalisile abathembekile impilo yonke.
I- "Please Forgive Me" izotholakala ukubukwa kwi-Apple Music streaming music service "unomphelo", futhi iyividiyo yesithathu ezokhishwa kanye ne-albhamu ethi "Views", eyandulelwe ngamavidiyo osihloko sithi "Hotline Bling" ngonyaka odlule , ne- "Childs Play" ekuqaleni kwale nyanga.
I-albhamu "Ukubukwa" kukaDrake kwahlala okukhethekile enkonzweni yakwa-Apple isonto lonke qedela. Kuthiwa ezinsukwini zayo zokuqala zokukhetha kuphela, i-albhamu ithengise amakhophi ayisigidi.
I-Apple iqinisa okuqukethwe kwevidiyo kwe-Apple Music
Muva nje, I-Apple isiqalile ukulungiselela ukuqinisa okuqukethwe kwevidiyo kusevisi yayo yomculo yokusakaza i-Apple Music.. Esinye sezinqumo ezithathwe maqondana nalokhu kube ukuthengwa kwe- I-Carpool Karaoke. I-Tpco singalahlekelwa umbono wokwenziwa kwezinhlelo zoqobo ezinjenge- "Vital Signs" zikaDkt Dre kanye ne-hybrid phakathi kochungechunge lwethelevishini nombukiso wangempela "Iplanethi Yezinhlelo Zokusebenza" lapho onjiniyela abahlukene, abakhethwe ngemuva kokulingiswa, bezolwela ukuwina okukhulu umklomelo okubandakanya ukushicilela uhlelo lwakho lokusebenza ku-Apple App Store.
U-Eddy Cue, umphathi we-iTunes, usanda kusho lokho I-Apple "ayizami ukudala imibukiso ye-TV yangempela" ngenhloso yokuba ngumncintiswano nezinsizakalo ezinjengeNetflix noma i-Amazon Video, kepha kuzosiza abakhiqizi ekwenziweni kwamaphrojekthi aklanywe ngomqondo wokukhangisa imikhiqizo ekhona ngaphakathi kohlelo lwe-apple olulumekile.
Ama-Apple exclusives awina abahlambalazi
Ngakolunye uhlangothi, inqubomgomo yokukhishwa okukhethekile okwenziwe yinkampani njengecebo lokukhuthaza abasebenzisi abasha ukuthi babhalisele insiza yokusakaza ye-Apple Music igxekwa kabuhlungu ngamalebuli amakhulu kanye nabagxeki ababalulekile embonini yezomculo.
Ngokuqondile, uLucian Grainge, CEO we I-Universal Music Group, umemezele nge-imeyili ethunyelwe kubo bonke abaphathi bamalebula ayingxenye yale nhlanganisela ukuthi inkampani kunqatshelwe ukuqhubeka nokwethulwa kuphela yemisebenzi yabadwebi ibilandele. Lesi sinqumo sisho ukuthi abaculi abadume njengoKendrick Lamar, Taylor Swift noma The The Weeknd phakathi kwabanye abaningi, bangabona ukuthi zilahlwa kanjani izivumelwano zabo zokuba wedwa ne-Apple Music, ngoba ngayinye yazo ingezinkampani ezahlukahlukene zokuqopha, ngokwesikhathi sazo. , ahlanganiswe ne-Universal Music Group.
Okwamanje, I-Apple Umculo Kusanda kubhukwa i-exclusive entsha, "Please Forgive Me," ifilimu emfushane edlala uDrake njengomphelelisi womsebenzi wakhe wakamuva, i- "Views."
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Umculo » UDrake Ukhipha "Ngicela Ungixolele," i-Exclusive Short On Apple Music
Usuku lwami lokuqala nge-Apple Watch Series 2. Ukuvela ngayo